HeatSync dia manome fitaovana hanangonana tahirin-kevitra tsy mitovy amin'ny loharanom-baovao marobe, handamina ny angon-drakitra, hitahiry azy ary hanolotra azy amin'ny fomba manome fahitana tsara kokoa momba ny fironana sy ny fahombiazan'ny tranokala. HeatSync dia misintona angona avy amin'ny Alexa, SimilarWeb, mifaninana, Google Analytics, Facebook, Twitter, Klout, MOZ, CrunchBase ary WOT mba hamenoana ny mombamomba, ny fandaharam-potoana ary ny motera fampitahanao ho an'ny tranonkalanao. Mombamomba ny tranokala - The HeatSync Website Profile dia maneho fijerena amin'ny antsipiriany amin'ny lafiny rehetra
Zava-dehibe ny manamarika fa ny sehatra media sosialy dia samy hafa be amin'ny tanjony sy ny endrik'izy ireo. Ity infographic avy amin'ny Fihaonana an-tampon'ny Media sosialy 2013 ity dia mamaky tsara ireo sokajy. Rehefa manomana paikady ara-tsosialy orinasa iray, ny habetsaky ny fitaovana azo ampiasaina amin'ny fitantanana ny media sosialy dia mety goavana. Nanangona fitaovana lehibe 25 izahay hanombohana anao sy ny ekipanao, voasokajy ho karazana fitaovana 5: Fihainoana ara-tsosialy, fifanakalozan-kevitra ara-tsosialy, marketing ara-tsosialy, analytics ara-tsosialy
Naheno momba an'i Klout aho taloha lasa izay nefa tsy niraika firy raha tsy nihaona tamin'ny ekipa Klout tany Las Vegas aho. Notsapaiko izany ary hitako fa tsy ampy ny isa sasany. Ohatra, maro amintsika no manana pejy marobe, kaonty marobe, ary tantara an-tserasera izay naharitra am-polony taona… saingy tsy nisy fiantraikany tamin'izany i Klout. Ny fotoana farany nanavaozan'i Klout ny isa dia very ahy tanteraka izy ireo. The
Manan-danja ny isa raha resaka marketing an-tserasera no resahina. Nitsikera an'i Klout aho fa mbola tiako ny orinasa manandrana mamorona metrika tsotra hamaritana toerana sy olona manan-kery amin'ny Internet. Tsy mody fantatro loatra ny naoty Klout, ary tsy miahiahy momba izany koa aho. Fa… indraindray, manamarina ny isa Klout (ny fampiharana Klout iPhone aho avelao hasehonao izany!). Raha tianao
Inona ny PROskore anao?
Alahady, Desambra 18, 2011 Douglas Karr
Betsaka ny hetsika mihetsika ankehitriny eo amin'ny sehatry ny isa. Mieritreritra aho fa nahazo tsikera kely i Klout tato ho ato… Sarotra ny maha-lehilahy voalohany anao eo amin'ny sehatra rehetra. Feno fankasitrahana aho fa nisy nandray ny lahasa sarotra tamin'ny fampivelarana ny isa voalohany amin'ny orinasa, ary manantena izy ireo fa afaka mampifanaraka ny algorithman'izy ireo ary manohy mampivoatra azy ireo. Iray amin'ireo mpifaninana hitako mandady
Tsotra toy ny mpankafy sy mpanaraka azy tsotra izao
Alarobia, Aprily 21, 2010 Asabotsy, Jona 27, 2015 Douglas Karr
Mpivarotra haino aman-jery sosialy: ny mpanara-dia dia tsy famantarana mahery ny fitaomana. Azo antoka… mazava ho azy sy mora izany - saingy kamo ihany koa. Ny isan'ny mpankafy na mpanaraka matetika dia tsy misy ifandraisany amin'ny fahafahan'ny olona na ny orinasa mitaona ny hafa. Toetra fito an'ny fitaomana an-tserasera Ny mpiorina dia tsy maintsy atao anaty resaka mifandraika. Ny mpilalao miaraka amin'ny mpanaraka bajillion dia tsy midika akory hoe afaka mitaona ny hafa momba ny vokatrao izy ireo